” အားလံုးေစာင့္ေမွ်ာ္ ဖတ္ရွုျခင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၈၁) ခုနွစ္အတြက္ သၾကၤန္စာ လာပါျပီ “. – Askstyle
” အားလံုးေစာင့္ေမွ်ာ္ ဖတ္ရွုျခင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၈၁) ခုနွစ္အတြက္ သၾကၤန္စာ လာပါျပီ “.
ဆရာမိတ္ေဆြမ်ား သၾကၤန္စာဖတ္႐ႈ့လို႔ရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။သၾကၤန္စာေရးသားသူ ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္ေ႒း ဂါရဝျပဳလက္အုပ္ခ်ီကန္ေတာ္လ်ွက္ပါ။
ေဇယ်တုသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း (၁၀)ရက္၊ (၁၄-၄-၂၀၁၉) တနဂၤေႏြေန႔ ညေနစက္ (၅)နာရီ (၂၁)မိနစ္ (၄၂)စကၠန္႔ အခ်ိန္တြင္ မဟာသႀကၤန္ က်သည္။ (၁၅-၄-၂၀၁၉) တနလၤာေန႔ မဟာသႀကၤန္ အၾကတ္ရက္ ျဖစ္သည္။
၁၃၈၀-ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း (၁၂)ရက္ (၁၆-၄-၂၀၁၉) အဂၤါေန႔ ည(၉)နာရီ (၂၆)မိနစ္ (၂၃)စကၠန္႔ အခ်ိန္တြင္ မဟာသႀကၤန္ တက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္၊ ဦးတန္ခူးလဆန္း (၁၃)ရက္ (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒၶဟူးေန႔သည္ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။
ဤ၁၃၈၁ခုႏွစ္တြင္ လထက္ရက္ငင္ မရိွပါ၍ ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာေတာ္ ဝန္ထမ္း ရဟန္းအရွင္ျမတ္ တို႔မွာ…
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ (၁၇-၇-၂၀၁၉) ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပထမပုရိမဝါ ကပ္ဆိုေတာ္မူၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္အတြက္ အရွင္သခင္ၿဂိဳ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ဝႆပတိ ဧကရာဇ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္
ေသနာပတိ ကာကြယ္ေရး တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္
သႆပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္
ရႆပတိ ကုနသြယ္ေရး ေသာၾကာၿဂိဳဟ္
နိရႆပတိ ဓာတ္သတၱဳ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ အသီးသီးတို႔သည္ ေနစၾကာဝဠာႀကီးအား ေဘးဥပါဒ္ အႏၲရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေဝးၿပီး ကမၻာသူ ကမၻာသား အေပါင္းတို႔အား ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေစျခင္း ေကာင္းက်ိဳး အလို႔ငွာ တာဝန္ အသီးသီးယူၾကလ်က္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကလတၱံ႕။
ယခုႏွစ္တြင္ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ႏွစ္၏ သခင္ၿဂိဳဟ္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။(နာရဒသံဟိတက်မ္း)
ဓံသီနတ္သမီးကား အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အဝါအားျဖင့္ ငါးပါးေသာ အဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္ သိၾကားမင္းကို ေစာင့္လင့္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဃ္းဦး၊ မိုဃ္းလယ္ ေကာင္းအံ့။ စစ္မက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚအံံ့။ ျပည္ႀကီးကို ျပည္ငယ္ႏိုင္စ ျပဳလာအံ့။ ဧကရာဇ္မင္းအေပါင္း ဥပါဒ္ျဖစ္တတ္ သည္။
ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ရြာငယ္အခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ဖန္ အႀကိမ္မ်ားလာအံ့။
ကုန္သြယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး သူေ႒းသူႂကြယ္ တို႔သည္လည္း ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့။ လယ္ယာ ေျမလုပ္ငန္းရွင္၊ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ တို႔သည္ အေႏွာင့္အယွက္ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရအံ့။
ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ဆင္၊ ျမင္းႏွင့္တကြ အေျခ(၄)ေခ်ာင္း သတၱဝါအမ်ား အေသအေပ်ာက္ မ်ားအံ့။ ထိုသတၱဝါတို႔၏အသားကို လြန္စြာ စားသံုးသူတို႔သည္ အႀကိတ္၊ အသမာ၊ အနာေရာဂါ ဆိုးမ်ားျဖစ္အံံ့။ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးၾကအံ့။
မဟာသႀကၤန္အက်ေန႔ အလိုကား- အခါလဂ္သည္ ကန္ရာသီလဂ္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သာမႏၲသႀကၤန္ မည္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ ျပည္သား (၇)ရက္ သားသမီး အေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ သႀကၤန္က် တနဂၤေႏြေန႔ တိထီ၁၀လံုး ပုဏၰာ ၾကာသပေတးေျမခံ၊ ျဂဟဇာ အထက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ဦးေခါင္းေဆးျခင္း မဂၤလာကို ဆင္ယင္က်င္းပ ျပဳရာ၏။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..ဒန္းညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ ကံ့ေကာ္ညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္ပါ။ အနေႏၲာ အနႏၲ(၅)ပါးတို႔အား ဦးထိပ္ ပန္ဆင္ၿပီး၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာအေပါင္းအား ရွစ္ခိုးဦးခ် ပူေဇာ္ကန္ေတာ့လ်က္ ဂဟပတိ အေနာက္ေတာင္ ေဒါင့္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကာ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။
တနလၤာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..အုန္းညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ ေနဇာညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေနာက္အရပ္ကို မ်တနလၤာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္ အုန္းညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ ေနဇာညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေနာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။
အဂၤါေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..ကံ့ေကာ္ညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ ခေရညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။
ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္….ေနဇာညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ သေျပညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။
ၾကာသပေတးေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..ခေရညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ သီးညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေရွ႕ အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။
ေသာၾကာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္….သေျပညႊန္႔ကို အခင္း ျပဳၿပီး၊ ဒန္းညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။
စေနေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္….သီးညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ အုန္းညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေရွ႕ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။
ရာဟုေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..ေနဇာညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ သေျပညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။
ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရေသာအက်ိဳးကား….သကၤေႏၲ၊ သႀကၤန္ဟု ေခၚေဝၚအပ္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ပုေဏၰ၊ အံသာ (၃၆၀) ရသျဖင့္ တစ္ဘဂဏျပည့္၍ မိန္ရာသီ အဝသာန္ နဝင္းမွ မိႆရာသီ အာဒိနဝင္းသို႔ ေျပာင္းခဲ့သည္ ရိွေသာ္။
ဣဓ၊ ဤလူ႔ျပည္၌ မာဏဝါ၊ သတၱဝါဟုေခၚေဝၚ အပ္ကုန္ေသာ။ မႏုဇာ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္၊ သိရာ၊ ဦးေခါင္းေဆး ကုနရာ၏။ ေတသံ၊ ထိုဦးေခါင္းေဆးကုန္ေသာ သူတို႔အား။ သတၱဘာဂီ၊ ခုႏွစ္ႏွစ္ကျဖစ္ကုန္ေသာ။
ေရာဂီ၊ အနာမ်ိဳးတို႔သည္။ ဝိနာေသယ်ံဳ၊ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏။ သုခေဘာဂီ၊ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အဘို႔ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ သတသဟႆာနိ၊ တသိန္းေသာ အက်ိဳးတို႔ သည္၊ ဘဝယ်ံဳ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။
ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာမျပဳရေသာအျပစ္ကား…ထိုဦးေခါင္း မေဆးကုန္ေသာ သူတို႔သည္။ သတၱ၊ ခုႏွစ္ပါး ကုန္ေသာ။ ဒ႑ေရာဂါစ။ ဒဏ္၊ အနာတို႔သည္၎၊ ဒုကၡဘာဂါစ၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အဘို႔တို႔သည္၎၊ သဒါ အခါခပ္သိမ္း၊ ဘေဝယ်ံဳ၊ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။
သႀကၤန္အခါေရွာင္ၾကဥ္ရန္အမႈမ်ားကား န႐ုဒံေမထုနံသုရာ၊ ဝဓေကာေဓနေတေလတာ။ ႐ုကၡေဆ ဒါဟ နႏၲႆ၊ ကိေဏယ်ဝိကၠိေဏယ်ဝါ။ ဣမာနိဒသကမၼာနိ၊ သေကၠာပိ ပရိဝေဇၨယ်။ သႀကၤန္ေန႔၌ မေတြ႕ေဝးစြာ။ ေရွာင္ကုန္ရာ ကား။ မသာႏွလံုး ညႇိဳးခ်ံဳး စိုးရိမ္။
မၿငိမ္ပူေဆြး။ ငိုေႂကြးကုန္ထ။ ကာမ အိမ္ရာ။ ေမထုနာက။ ပါဏာသတ္ပုတ္။ ေသာက္ထုတ္ ေသရက္။ မ်က္ထြက္မာန။ ပဋိဃႏွင့္။ ေဒါသမလြတ္။ ဆီပြတ္ လိမ္းဆင္။ သစ္ပင္ခုတ္ျဖတ္။ သတ္ခတ္ ကုန္ေရွာင္။ အေရာင္းအဝယ္။ လဲလွယ္ဟူသည္။
ဤဆယ္ မည္ကို။ လူ႔ျပည္၌တြင္။ လူကို စင္ထား၊ ျမင့္မိုရ္ဖ်ားဝယ္။သိၾကားေသာ္မွ၊ မျပဳရရာ။ ေရွာင္ၾကဥ္ ရာဟု။ က်မ္းလာေသာအား။ လကၤာၾကားသည္။ ဤကား မဟာ သႀကၤန္အက် အလိုတည္း။
မဟာသႀကၤန္အတက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား….အဂၤါေန႔ဖြား သားသမီးအေပါင္းတို႔သည္ မတာတက္ေသာ ေန႔ အခါသမယ ရတနာ(၃)ပါး၊ ဘိုးဘြား၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ ဝါအားျဖင့္ ႀကီးျမတ္သူ၊ ညီအစ္ကို၊ အစ္မ၊ မိတ္သဂၤဟ အေပါင္းအသင္း တို႔အား လႉဘြယ္ပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းျခင္း၊ အာဟာရ ေကြ်းေမြး ျခင္း အစရိွသည့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဦးခ် ကန္ေတာ့ရ၏။
အတာစားရျခင္း၏အက်ိဳးကား…. ဤအတာပုည ကုသလကို၊ ျပဳၾကကုန္ေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္၊ အတာကမၼံကေရာႏၲႆ၊ မဟာေဘာဂံ မဟာ သုခံ၊ မဟပၹလံစာတုဒၵိသံ၊ ေဝရီေဇယ်ံသုမဂၤလံ။
ဟု,ပေႆနဒီ ေကာသလမင္းႀကီးအား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆိုခဲ့ေသာ ရတနာသံုးပါး စသည္တို႔အား လႉဒါန္း ပူေဇာ္ ပသျခင္းသည္ အက်ိဳးႀကီးျမတ္လွ၏။ လႉဒါန္း ပူေဇာ္ ပသ ကုန္ရာသည္ဟု က်မ္းဆရာတို႔ ဆိုၾကကုန္၏။
ဤႏွစ္သည္ အတာစကၠဴစာအလိုအရ မာဃႏွစ္ တည္း၊ ႏွစ္ကို ဝက္ေစာင့္၏။ လကို က်ီးေစာင့္၏။ ရက္ကို ေခြးေစာင့္၏။ ေျမကို ဒြန္းစ႑ား ေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ရုတၱရနတ္ေစာင့္ ၏။ ေရကို ႂကြက္ေစာင့္၏။
မိုဃ္းကို ဝမ္းဘဲေစာင့္၏။ ေတာကို ယစ္ေစာင့္၏။ လူတို႔ အဓိပတိကား- မင္း၊ အေျခ(၄)ခုတို အဓိပတိကား- ေတာဝက္၊ ငွက္တို႔ အဓိပတိကား- စြန္၊ သစ္ပင္တို႔ အဓိပတိကား- သင္းကနက္၊ ဝါးတို႔ အဓိပတိကား- သိုက္ဝါး၊ ျမက္တို႔ အဓိပတိကား- ျမက္ရဲ၊ နကၡတ္(၁၃)လံုးငုတ္၏။
(၁၄)လံုး ေပၚ၏။ ေျမဩဇာမရိွ။ မိုဃ္းဦး နာအံံ့၊ မိုးလယ္ မိုးေႏွာင္း ေကာင္းအံ့။ ေရႀကီးအံ့၊ ေလေႏွာင္းအံံ့။ မုန္တိုင္းေလေပြထန္အံ့။ မိုးအႀကိမ္ (၆၀)ရြာအံ့။ ေကာက္ပဲ အသီးအႏွံတို႔ အဖ်င္းမရိွ။ ေက်း၊ ေတာင္၊ေတာမေကာင္း။
သစ္ပင္ဟူသမွ်လည္း မေကာင္း။ အျမစ္၊ အဖု၊ အရြက္နာအံ့။ ။အပြင့္၊ အသီးနည္းအံ့။ လူတို႔ အနာ အဖ်ား မ်ားကုန္အံ့။ တန္ခူးလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအံ့။ ဝါဆိုလမွာ မိုးမွန္အံ့။ လူတို႔ ဝေျပာကုန္အံ့။ စစ္မက္မရိွ ျပည္ရွင္မင္း ႏွလံုးခ်မ္းသာအံ့။
ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ဥစၥာ ပရိကၡရာမ်ားအံ့။ ပညာအဆင္အျခင္မရိွ။ ေလာဘရမၼက္ႀကီးအံ့။ အဂၤါလကၡဏာခ်ိဳ႕တဲ့အံ့။ အဆင္းအဝါတံ့အံ့။ အမူအက်င့္ ညစ္အံ့။ ခ်စ္သူခင္သူ နည္းအံ့။ အသက္(၇၀)ေနရအံ့။
ယခုႏွစ္အတြက္ မဟာသႀကၤန္က် အခါလဂ္သည္ ကန္ရာသီလဂ္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စာအုပ္၊ စာေပက႑ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လာၾကမည္။ ထို႔အျပင္ ဝိဇၨာ၊သိပၸံအတတ္ပညာရပ္ မ်ား ဦးစားေပး သင္ၾကားမႈကို သက္ဆိုင္ရာ႒ာန အသီးသီးမွ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကလတၱံ႕။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းသည္လည္း တဟုန္ထိုး တိုးတက္ႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္လည္္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ရိွလာႏိုင္သည္။ ေငြေၾကး ခိုင္မာမႈ ရရိွေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးစားၾကလတၱံ႕။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြ ျခင္းကို အထူးစီစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ရိွတတ္သည္။
သိပၸံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာရပ္မ်ား အသံုးခ်မႈ ေပါမ်ားလာႏိုင္သကဲ့သို႔ တစ္ဖန္ ဝိဇၨာအတတ္ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း လူအေပါင္းတို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားလာ အံ့။ အထက္လမ္း၊ ေအာက္လမ္း ေမွာ္အတတ္ အတိုက္ဓာတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လည္း စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ၾကအံ့။
စီးပြားဥစၥာ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝသူ အေပါင္း တို႔သည္လည္း ေလာကီပညာရပ္မ်ားကို ေငြေၾကးမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ လိုက္စားၾကအံ့။
ဝိဇၨာ၊ သိပၸံပညာရွင္ အေပါင္းတို႔အားတို႔၏ ဂုဏ္သတင္း မ်ားလည္း ေက်ာ္ၾကားမႈရိွတတ္သည္။
ပညာရိွမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအံ့။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စည္းကမ္းစနစ္ ခိုင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကအံ့။
(၇) ရက္ သားသမီးမ်ား ေဟာစာတမ္း
တနဂၤေႏြေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အရာရာကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးမတည္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ တို႔ကို စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ား လာတတ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါေသာ္လည္း တုန္လႈပ္မႈ မရိွေစဘဲ ရဲဝံ့ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားရန္ လိုအပ္ပါမည္။
ဤႏွစ္ထဲတြင္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳ အေပါင္းတို႔ အခ်စ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ကို ဦးစားမေပးသင့္ပါ။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအဖို႔ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးပါ။
ပညာေရးေလာကတြင္ အထူးကံေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္ပါ၍ လူငယ္၊ လူႀကီး မေရြး ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ။ မိမိလိုက္စား သင္ၾကားေနေသာ ပညာရပ္သည္ မိမိဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးပါလိမ့္ မည္။
က်န္မာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ေရာဂါေဝဒနာ မ်ား ဝင္ေရာက္လာတတ္သည္။ထို႔အျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မေမ်ာ္လင့္ေသာ ယာဥ္အတိုက္အခိုက္ ဥပါဒ္အႏၲရာယ္ျဖင့္လည္း ၾကံဳတတ္သည္။ မိမိအသက္အႏၲရာယ္ကို ထိပါးလာတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အျမဲသတိထားပါ။
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကံေကာင္းရန္ ေျမာက္ဘက္အရပ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေနရာ၌ သဲပံု ေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊ ပုန္းညက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲ/ယာတြင္ ေဇာင္းယားပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါ။
နီေရႊေရာင္၊ ပတၱျမား အဆင္း ရိွေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို ဝတ္ဆင္ပါ။ တနဂၤေႏြသားသမီး မ်ား ၁ႏွစ္ပါတ္လံုး အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၅-၉-၀။
တနလၤာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိ အလိုဆႏၵမ်ား မျပည့္ဝတတ္ေပ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သတိခ်ပ္၍ လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ရင္းႏီွးမတည္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လြန္ကဲစြာ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
ရွယ္ယာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးစေတာ့ ေစ်းကြက္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ ထီေသာ္လည္း ေပါက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသေဘာထားျဖင့္ မိမိထင္ရာကို တစြတ္ထိုးမျပဳလုပ္ပဲ အျမဲတေစ ႏွီးေႏွာ တိုင္ပင္လုပ္ကိုင္ပါ။ ေ
ငြေၾကးျပတ္လတ္ ေငြ အခက္အခဲ ျဖစ္တတ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြေႏြးသင့္ပါ သည္။မိတ္အေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား သတိထားပါ။ အခ်စ္ေရး ေလာကအတြက္ မိမိအသံုးခ်ခံရတတ္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္ရွင္ မ်ားသည္လည္း သားသမီး အပူေသာက မိဘ၊ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အပူေသာက ေပါမ်ားတတ္ၿပီး အိမ္တြင္ေရး ပဋိပကၡမ်ားတတ္ သည္။ ပညာရွာေဖြေနသူမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္ကို ဦးစားေပး သင္ၾကားပါ။ မိဘအုပ္ထိန္း သူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တန္ဖိုးျမႇင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ေသြးတိုး၊ ေသြးက်၊ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရး လိုက္စားပါ။ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။
တနလၤာသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ အရပ္မွာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္ပါ။ ဘုရားေစတီေဟာင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ေဆးသုတ္ျခင္း၊ေရာင္ေတာ္ ဖြင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
ခ်ယားပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေရွ႕အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာ၌ လက္ပံပင္စိုက္ပါ။ အျဖဴေရာင္ရိွ ပုလဲရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ (၄)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္း အဆံုးျဖစ္သည္။
အဂၤါေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ စိတ္အလိုမက်မႈမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရမည္။ ထို႔အျပင္ မိမိေဒါသေၾကာင့္ မိမိဘဝ ထိခိုက္နစ္နာ ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးမႈလည္း ျဖစ္တတ္သည္။
စီးပြားေရး ေလာကတြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီး ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဝင္လာတတ္သည္။ လူပေယာဂအရေသာ္၎၊ ေဆးဝါး ပေယာဂအတိုက္ဓာတ္၊ ေအာက္လမ္း၊အထက္လမ္း အစရိွသည့္ နည္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ ေမြေႏွာက္တတ္သည္။
ကာယအလုပ္ျဖင့္ စီးပြားရွာေဖြေနသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေရးကို သတိျပဳ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ။ ေငြေၾကး ေခ်းငွား ေႂကြးၿမီတင္ မႏိုင္မနင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရးကိစၥ ရပ္အတြက္ မည္္သူကိုမွ် ယံုၾကည္၍မရပါ။ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ အေျပာင္း အလဲရိွတတ္သည္။ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား မၾကာခဏ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား တက္လာႏိုင္ပါ၍ ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳ သင့္ ေပ။
ႏွစ္ကိုယ္ သေဘာတူလက္တြဲျခင္း၊ အခြင့္အေရးယူျခင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မၾကာခဏ စိတ္က်ေရာဂါ၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။အထူးသျဖင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ကာလာေပၚ အနာေရာဂါမ်ား ေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာပိုးမႊား ေရာဂါမ်ား၊ ခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါမ်ား၊ အတိုက္အခိုက္ ထိခိုက္ အနာတရ က်ိဳးပဲ့တတ္သည္။
လူစည္ကားရာေနရာမ်ား အသြားအလာ ေရွာင္ပါ။ ယာဥ္ပစၥည္း၊ လက္နက္ပစၥည္း၊ မီးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ သံထည္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရာ သတိျပဳပါ။ အဂၤါသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္… အေရွ႕အရပ္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ တံခြန္စိုက္ပါ။
သရဖီပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္၌ လမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ ေပါက္ပန္းျဖဴစိုက္ပါ။ နီရဲေသာ သႏၲာေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။ အဂၤါသားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ (၆)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္းအဆံုး ျဖစ္သည္။
ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ အတတ္ပညာရပ္မ်ားကို မိမိဝါသနာအား အရင္းခံ၍ ထြန္းေပါက္ ေအာင္ သင္ၾကားပါ။ ဘဝအတြက္ တိုးတက္ခ်မ္းသာမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါမည္။ ပညာရပ္ကို အေျခခံၿပီး ရွာေဖြေသာ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ရိွမည္။
အခ်စ္ေရး ကိစၥရပ္အတြက္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား မေလွ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေပးပါ။ လိုခ်င္ေတာင့္တအပ္ေသာ အရာမွန္သမွ် ရရိွႏိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အတြက္ သားသမီး၊တပည့္မ်ား တိုးပြားလာမည္။
မိမိတို႔၏ ေရွ႕ေရး ဘဝ တိုးတက္ ခိုင္ျမဲႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူရရိွရန္ စိတ္ရွည္သီးခံၿပီး တပည့္ ေမြးျမဴရန္ သင့္ေတာ္ေပသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား သတိျပဳပါ။
မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါမ်ား ၊ အဆစ္မ်ားကိုက္ခဲျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မ်ား သတိျပဳပါ။မေမ်ာ္လင့္ေသာ ဘဝအေျပာင္းအလဲြမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္… အေရွ႕ေတာင္အရပ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေနရာ၌ လမ္းခင္းပါ။ တံတားေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။
ကြမ္းသီးပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ သခြပ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါ။
အစိမ္းေရာင္ရိွေသာ ေက်ာက္စိမ္း ရတနာကို ဝတ္ဆင္ပါ။ ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ အက်ိဳးေပး ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅-၉-၀ျဖစ္သည္။
ၾကာသပေတးေန႔ဖြား အေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မၾကာခဏ လုပ္ကိုင္ရတတ္ေပသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို သစၥာဆို တိုင္တည္ၿပီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာ လုပ္ကိုင္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ သည္ မိမိလက္တကမ္းသို႔ ေရာက္ရိွေနပါမည္။
လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမည္။ အထက္တန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိအား အေလးထား ခ်ီးျမႇင့္ မ,ဆျခင္းကို ခံရ တတ္သည္။ စည္းကမ္းစနစ္တက် လုပ္ကိုင္ရမည္။ ကာယလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ပါက မိမိလုပ္အားခ အျပည့္အဝ ရရိွမည္။ အခြင့္ထူးမ်ား ရရိွႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ မိမိ၏ဘဝနစ္မြန္း ခံရတတ္သည္။ ပညာရိွ၊ သူေတာ္ေကာင္း ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို အျမဲစည္းကပ္ပါ။ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူပါ။ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား ျဖစ္ပါက မိမိ အားကိုးအားထားျပဳရေသာ ဖူးစာရွင္ကို ေတြ႕ရတတ္ၿပီး ဘဝ တိုးတက္မႈ ရိွႏိုင္သည္။
အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ မိသားစုအေပၚ သစၥာေစာင့္ထိန္းသင့္ပါသည္။ အပူကပ္လာသူမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ပူေလာင္ရတတ္၏။ ပညာေရးက႑တြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ စိတ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္တတ္သည္။
ပညာဆည္းပူေနသူမ်ားလည္း ေရွ႕မတိုး ေနာင္မဆုတ္သာ ျဖစ္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဘဝရပ္တည္ ေရးအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။
ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္… အေနာက္ေတာင္ အရပ္မွာ ဇရပ္ေဆာက္လႉျခင္း၊အမိုးအကာျပဳျပင္ျခင္း၊ဘုရားေစတီေဟာင္း ျပဳျပင္ ေဆးသုတ္ျခင္းမ်ား ျပဴလုပ္ပါ။ ဒါန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။
အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ လမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ ထေနာင္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။ အဝါေရာင္အဆင္း ရိွေသာ ဥႆဖရား ရတနာကိုဝတ္ဆင္ပါ။ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ (၅)ျဖစ္သည္ စပ္တူထီထိုးပါ။
သို႔ေသာ္ ခိုင္မာတိက်ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ပါ။ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ပို၍ ေကာင္းသည္။
ဝန္ထမ္းေလာက လုပ္ကိုင္ေနပါက မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ မိမိအက်ိဳး သူတစ္ပါးအက်ိဳး လည္းျဖစ္ထြန္းပါမည္။အခ်စ္ေရးေလာကတြင္ အထူးမ်က္ႏွာပြင့္လန္းေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။
အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားမႈ ရိွမည္။ ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားလည္း ရရိွတတ္သည္။ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားရမည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးမႈကို အေၾကာင္းျပ ေျပာဆို၍ ေပးအပ္လာေသာ အပိုလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား လက္မခံသင့္ေပ။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မေပးသင့္ပါ။ ပံုမွန္ အားကစား တခုခုကို အျမဲလုပ္ပါ။
လူအမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရေသာအားကစား တမ်ိဳးကို လိုက္စားပါ။ က်န္းမာသန္စြမ္း စိတ္ရႊင္လန္းပါမည္။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…. အေနာက္ေျမာက္ အရပ္မွာ တန္ေဆာင္းျပဳလုပ္ လႉဒါန္းျခင္း၊ ေလွကားျပဳျပင္ လႉဒါန္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ ေျမာက္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ အုန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
စိန္ရတနာကို ဝတ္ဆင္ပါ။ ေသာၾကာေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ စပ္တူရွယ္ယာ (သို႔မဟုတ္) သူတပါးအား ထီထိုးခိုင္းၿပီး ထီလက္မွတ္ သိမ္းဆည္းပါ။ ထီေပါက္ႏိုင္ပါသည္။
စေနေန႔ဖြား အေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိလက္ရိွ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရိွပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မိမိအလိုဆႏၵျပည့္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခန္႔ခြဲၿပီး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။
မည္သူကိုမွ် ယံုၾကည္၍မရပါ။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ပါ။ မႏိုင္ဝန္ကို မထမ္းပါႏွင့္။ မိတ္သဂၤဟအေႁခြအရံမ်ား ေပါမ်ား လာေအာင္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားလုပ္ပါ။အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳခံရတတ္ၿပီး ဘဝအထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ရိွပါမည္။ တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကး မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းေလာကတြင္ လုပ္ကိုင္ေနပါက အေမွာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကး ရွာေဖြျခင္းကို လံုးဝစြန္႔လြတ္ပါ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မိမိအား ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ ခ်ဥ္းကပ္ လာတတ္သည္။
အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ အခြင့္အလန္းမ်ားရိွသည္။ သို႔ေသာ္ အမုန္းပြားေစတတ္ေသာ အျပစ္မကင္း ေသာ အမႈကိစၥမ်ား မၾကဴးလြန္ရန္ သတိျပဳပါ။ ပညာေရးအတြက္ ဤႏွစ္သည္ စေနသားသမီးမ်ား ဂုဏ္ထူး၊ ဘြဲ႕ထူးခံရမည့္ မဂၤလာရိွေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။
ပညာေရးက႑ အသီးသီးရိွ လူႀကီး၊ လူငယ္ လူတန္းစားမေရြး ဆက္လက္ ျကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္ အၾကံျပဳပါသည္။က်န္းမာေရးအတြက္ စည္းကမ္းစနစ္တက် စားေသာက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အပန္းေျဖ ခရီးသြား လာျခင္း၊ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
မထင္မွတ္ေသာ ေလာကဓံတရားမ်ား ရိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူ႔ပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ ထားရိွသမွ် အားလံုး တိုက္ခိုက္ခံရ၍ ပ်က္စီးရတတ္သည္။
ရန္သူအေပါင္း စုေပါင္း လုပ္ၾကံလာတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားအတိုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါ။
စေနသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…. ေတာင္အရပ္မွာ တံခြန္ စိုက္ပါ။
ကံ့ေကာ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ၾကက္ဆူပင္စိုက္ပ်ိဳးပါ။
နက္ျပာေရာင္ရိွေသာ နီလာရတနာကို ဝတ္ဆင္ ပါ။ စေနသားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ သူတပါးအတြက္ ရည္စူး၍ ၾကံဳရာ ထီဂဏန္းကို ထိုးပါ။
ဆရာမိတ်ဆွေများ သြင်္ကန်စာဖတ်ရှု့လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။သြင်္ကန်စာရေးသားသူ ဆရာကြီးဦးကျော်ဋ္ဌေး ဂါရဝပြုလက်အုပ်ချီကန်တော်လျှက်ပါ။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၁၀)ရက်၊ (၁၄-၄-၂၀၁၉) တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေစက် (၅)နာရီ (၂၁)မိနစ် (၄၂)စက္ကန့် အချိန်တွင် မဟာသြင်္ကန် ကျသည်။ (၁၅-၄-၂၀၁၉) တနင်္လာနေ့ မဟာသြင်္ကန် အကြတ်ရက် ဖြစ်သည်။
၁၃၈၀-ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၁၂)ရက် (၁၆-၄-၂၀၁၉) အင်္ဂါနေ့ ည(၉)နာရီ (၂၆)မိနစ် (၂၃)စက္ကန့် အချိန်တွင် မဟာသြင်္ကန် တက်သည်။ ထို့ကြောင့် ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။
သာသနာတော်အတွက် ဝါဆို-ဝါကပ်၊ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား…
ဤ၁၃၈၁ခုနှစ်တွင် လထက်ရက်ငင် မရှိပါ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သာသနာတော် ဝန်ထမ်း ရဟန်းအရှင်မြတ် တို့မှာ…
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၁)ရက် (၁၇-၇-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပထမပုရိမဝါ ကပ်ဆိုတော်မူကြ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယ ပစ္ဆိမဝါကို မြန်မာ ဝါခေါင် လပြည့်ကျော် (၁)ရက် (၁၆-၈-၂၀၁၉) သောကြာနေ့တွင် ကပ်ဆိုတော်မူကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ကန်ဦးမူ၊ သြင်္ကန်စကားပြေကျမ်း)
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်အတွက် အရှင်သခင်ဂြို ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဝဿပတိ ဧကရာဇ် သောကြာဂြိုဟ်
သေနာပတိ ကာကွယ်ရေး တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်
သဿပတ် စိုက်ပျိုးရေး ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်
ရဿပတိ ကုနသွယ်ရေး သောကြာဂြိုဟ်
နိရဿပတိ ဓာတ်သတ္တု ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် အသီးသီးတို့သည် နေစကြာဝဠာကြီးအား ဘေးဥပါဒ် အန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပြီး ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အပေါင်းတို့အား ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာစေခြင်း ကောင်းကျိုး အလို့ငှာ တာဝန် အသီးသီးယူကြလျက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးကြလတ္တံ့။
ယခုနှစ်တွင် တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ စနေဂြိုဟ်တို့သည် နှစ်၏ သခင်ဂြိုဟ် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ။(နာရဒသံဟိတကျမ်း)
အောင်ဇေယတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀-ခု၊ ဒီဃနှစ်ကြွင်း ၂၈၀ ရဿ ဝေါဟာရမာသ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၁၀)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၁၉ ဧပြီလ (၁၄)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ စံတော်ချိန် ညနေ(၅)နာရီ (၂၁)မိနစ် (၄၂)စက္ကန့်၊ မြန်မာနာရီ နေ့ဗဟိုရ်(၃)ချက်တီးကျော် (၅)နာရီ (၂)ပါဒ် (၅)ဗီဇနာ (၃)ပြဏ် (၂)ခရာ၊ ကန်ရာသီလဂ် ကရကဋ်ရာသီစန်း စန်းယှဉ် အသလိဿနက္ခတ် တနင်္ဂနွေ ဟောရတ် စနေတြင်း ဗုဒ္ဓဟူးနဝင်း ကြာသပတေး ဒွါဒသင်း ကြာသပတေး တိံသင်း၊
လဂ်စီးနက္ခတ် ဟဿတနက္ခတ် (၁၂)လုံး (၂)ပါဒ် (၂)ဃဋီ (၂၆)ဝိဃဋီ (၆)အနုဃဋီထက် လဂ်စီးလျက် ထိုနာရီ၏ ဣဋ္ဌဘဝါးကား (၃၀)ဘဝါး (၁၁)လက်သစ် (၆)မုယော (၃)နှမ်း (၈)ဆံခြည် မွန်းတည့်နက္ခတ်ကား ပုဏ္ဏဗသျှုနက္ခတ် (၈၀)အံသာ (၁၀)လိတ္တာ (၃၀)ဝိလိတ္တာ ပြည့်မတ်သော မင်္ဂလာအခါ သမယတွင် (ယုဂ်၂၈မှ) ဝဇရယုဂ်၊ (ယုဂ်၂၇မှ) သုလယုဂ်၊ ပုဏ္ဏာတိထီ ၁၀လုံး တေတိလကရိုဏ်းနှင့် ယှဉ်လျက်၊
ဘာနုရာဇဂြိုဟ်မင်းသည် ကြာဝတ်ဆံ အဆင်းနှင့်တူသော အဝတ်တန်ဆာကိုဝတ်ဆင်လျက်၊နဂါးကိုစီး၍ လက်တဘက်ကား မြှား၊ လက်တဘက်ကား လွှားကိုကိုင်၍ အရှေ့မြောက်ထောင့် ကသည် အနောက်သို့ဝင်၏ နန္ဒာဒေဝီနတ်သမီးကား အလှည့်စေ့၍ ပရမိသွာနတ်မင်း၏သား အာသီအမည်ရှိသော ဗြဟ္မာမင်း၏ ဦးခေါင်းကို ကမ်းသည်ရှိသော် ကညာဒေဝီနတ်သမီးကား ခရီးဦး ကြိုဆို၍ ရပ်စောင့်နေလျက် လှမ်းလင့်၏။
ဓံသီနတ်သမီးကား အဖြူ၊ အနီ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အဝါအားဖြင့် ငါးပါးသော အဆင်းဖြင့်ပြီးသော အဝတ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက် သိကြားမင်းကို စောင့်လင့်၏။ ထို့ကြောင့် မိုဃ်းဦး၊ မိုဃ်းလယ် ကောင်းအံ့။ စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်အံံ့။ ပြည်ကြီးကို ပြည်ငယ်နိုင်စ ပြုလာအံ့။ ဧကရာဇ်မင်းအပေါင်း ဥပါဒ်ဖြစ်တတ် သည်။
ပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ရွာငယ်အချို့ မီးလောင်ဖန် အကြိမ်များလာအံ့။
ကုန်သွယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး သူဋ္ဌေးသူကြွယ် တို့သည်လည်း ဘေးဥပါဒ် ဖြစ်ကြကုန်အံ့။ လယ်ယာ မြေလုပ်ငန်းရှင်၊ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ တို့သည် အနှောင့်အယှက် အခက်အခဲများဖြင့် ရင်ဆိုင်ရအံ့။
ကျွဲ၊ နွား၊ဆင်၊ မြင်းနှင့်တကွ အခြေ(၄)ချောင်း သတ္တဝါအများ အသေအပျောက် များအံ့။ ထိုသတ္တဝါတို့၏အသားကို လွန်စွာ စားသုံးသူတို့သည် အကြိတ်၊ အသမာ၊ အနာရောဂါ ဆိုးများဖြစ်အံံ့။ ကူးစက်ရောဂါ များကြောင့် ပျက်စီးကြအံ့။
လူအချို့တို့သည် အစာ အာဟာရ ပြတ်လပ်၍ ငတ်မွတ်ကြအံံ့။ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအကြီးအကဲများ အမျက်ဒေါသ သင့်ကြကုန်အံ့။ ရေနေသတ္တဝါများ၊ ငါးမျိုးစိပ်များ ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်တတ်သည်။ အတောင်ရှိသော ကျေးငှက် သတ္တဝါအပေါင်းတို့ သည်လည်း ဘေးဥပါဒ်သင့်ကြကုန်အံ့၊ အရှေ့ အရပ်ဒေသရှိ တိုင်းနိုင်ငံ ပြည်နယ်အချို့ ပျက်စီးတတ် သည်။
အနီရောင်ရှိသော ကွမ်းသီး၊ ငြုပ်သီး အစရှိသည့် အသီးအနှံများ ယခုနှစ် ဈေးကောင်းအံ့။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား အကျိုးအမြတ်ရှိကြကုန်အံ့။ ဤကား မဟာသြင်္ကန်ကျနေ့ အလိုအားဖြင့် ဟောကြားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မဟာသြင်္ကန်အကျနေ့ အလိုကား- အခါလဂ်သည် ကန်ရာသီလဂ် ဖြစ်ပါသောကြောင့် သာမန္တသြင်္ကန် မည်ပါသည်။
အများပြည်သူ ပြည်သား (၇)ရက် သားသမီး အပေါင်းတို့သည် မိမိတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာအားဖြင့် သြင်္ကန်ကျ တနင်္ဂနွေနေ့ တိထီ၁၀လုံး ပုဏ္ဏာ ကြာသပတေးမြေခံ၊ ဂြဟဇာ အထက်အရပ်ကို မျက်နှာမူလျက် ဦးခေါင်းဆေးခြင်း မင်္ဂလာကို ဆင်ယင်ကျင်းပ ပြုရာ၏။
ဝိသေသအားဖြင့် သြင်္ကန်အကျ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား သားသမီး အပေါင်းနှင့် ထိုနေ့၏ တိထီမြေခံလျက် ရှိထားသော ကြာသပတေးနေ့ဖွား သားသမီးအပေါင်းတို့ အတွက်ကား၊ သြင်္ကန်အကြတ် တနင်္လာနေ့တွင် ဂြဟဇာပွင့်ရာ အရှေ့ရပ် မျက်နှာမူလျက် တနင်္ဂနွေနေ့ သားသမီးက ဒန်းညွှန့်အခင်းပြု ကံ့ကော်ညွှန့်ကိုင်၊ ကြာသပတေးနေ့ဖွား သားသမီးက ခရေညွှန့် အခင်းပြု သီးညွှန့် ကိုင်၍ ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရာ၏။
အင်္ဂါနေ့တွင် အရှေ့တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူလျက် မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အညွှန့်ပန်းတို့ကို အဆောင်ပြုလျက် ဦးခေါင်းဆေး နှစ်သစ် အတာကူးမင်္ဂလာကို ဆင်ယင်ကျင်းပရန် သြင်္ကန် စကားပြေကျမ်းမှ ညွှန်ပြထားရှိပါသည်။
အခါအားလျော်စွာ အတာကူးပြောင်း ဦးခေါင်းဆေး မင်္ဂလာမဏ္ဍပ်များ ပြုလုပ်ပြီး ဘိုးဘွား သက်ကြီးရွယ်အိုများ မိဘ၊ ဦးကြီး၊ ဦးလေး၊ အစ်ကို၊ အစ်မ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ ဝါအားဖြင့်ကြီးသူတို့ကိုလည်း ကုသိုလ်ပြု ဦးခေါင်းဆေး ဒါနပြုခြင်းဖြင့် နှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာကို ဆင်ယင်ကျင်းပစေလိုပါသည်။
မိမိနှင့်တကွ တိုင်းရင်းပြည်သူ ပြည်သားများ အားလုံး မေတ္တာတိုးပွားပြီး စည်လုံးညီညွတ်ကြ လျက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ နှစ်သစ် အခါသမယမှ စတင် ရရှိပါစေ သော်။
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည်…..ဒန်းညွှန့်ကို အခင်းပြုပြီး၊ ကံ့ကော်ညွှန့် ကိုင်ဆောင်ပါ။ အနန္တော အနန္တ(၅)ပါးတို့အား ဦးထိပ် ပန်ဆင်ပြီး၊ ပူဇော်ထိုက်သူ လူ၊နတ်၊ဗြဟ္မာအပေါင်းအား ရှစ်ခိုးဦးချ ပူဇော်ကန်တော့လျက် ဂဟပတိ အနောက်တောင် ဒေါင့်အရပ်ကို မျက်နှာမူကာ ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပရာ၏။
တနင်္လာနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည်…..အုန်းညွှန့်ကို အခင်းပြုပြီး၊ နေဇာညွှန့် ကိုင်ဆောင်လျက် ဂဟပတိ အနောက်အရပ်ကို မျတနင်္လာနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည် အုန်းညွှန့်ကို အခင်းပြုပြီး၊ နေဇာညွှန့် ကိုင်ဆောင်လျက် ဂဟပတိ အနောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူကား ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပရာ၏။
အင်္ဂါနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည်…..ကံ့ကော်ညွှန့်ကို အခင်းပြုပြီး၊ ခရေညွှန့် ကိုင်ဆောင်လျက် ဂဟပတိ အနောက်မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူကား ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပရာ၏။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည်….နေဇာညွှန့်ကို အခင်းပြုပြီး၊ သပြေညွှန့် ကိုင်ဆောင်လျက် ဂဟပတိ မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူကား ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပရာ၏။
ကြာသပတေးနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည်…..ခရေညွှန့်ကို အခင်းပြုပြီး၊ သီးညွှန့် ကိုင်ဆောင်လျက် ဂဟပတိ အရှေ့ အရပ်ကို မျက်နှာမူကား ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပရာ၏။
သောကြာနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည်….သပြေညွှန့်ကို အခင်း ပြုပြီး၊ ဒန်းညွှန့် ကိုင်ဆောင်လျက် ဂဟပတိ တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူကား ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပရာ၏။
စနေနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည်….သီးညွှန့်ကို အခင်းပြုပြီး၊ အုန်းညွှန့် ကိုင်ဆောင်လျက် ဂဟပတိ အရှေ့ မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူကား ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပရာ၏။
ရာဟုနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည်…..နေဇာညွှန့်ကို အခင်းပြုပြီး၊ သပြေညွှန့် ကိုင်ဆောင်လျက် ဂဟပတိ အရှေ့တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူကား ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပရာ၏။
မှတ်ချက်။ ။ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အာလုံး နံတူရာ ပန်းပွင့်၊ ပန်းညွှန့်များအားလုံး အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။)
ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရသောအကျိုးကား….သင်္ကန္တေ၊ သြင်္ကန်ဟု ခေါ်ဝေါ်အပ်သော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းသည် ပုဏ္ဏေ၊ အံသာ (၃၆၀) ရသဖြင့် တစ်ဘဂဏပြည့်၍ မိန်ရာသီ အဝသာန် နဝင်းမှ မိဿရာသီ အာဒိနဝင်းသို့ ပြောင်းခဲ့သည် ရှိသော်။
ဣဓ၊ ဤလူ့ပြည်၌ မာဏဝါ၊ သတ္တဝါဟုခေါ်ဝေါ် အပ်ကုန်သော။ မနုဇာ၊ လူအပေါင်းတို့သည်၊ သိရာ၊ ဦးခေါင်းဆေး ကုနရာ၏။ တေသံ၊ ထိုဦးခေါင်းဆေးကုန်သော သူတို့အား။ သတ္တဘာဂီ၊ ခုနှစ်နှစ်ကဖြစ်ကုန်သော။
ရောဂီ၊ အနာမျိုးတို့သည်။ ဝိနာသေယျုံ၊ ကင်းပျောက်ကုန်၏။ သုခဘောဂီ၊ ချမ်းသာခြင်း၏ အဘို့ ဖြစ်ကုန်သော၊ သတသဟဿာနိ၊ တသိန်းသော အကျိုးတို့ သည်၊ ဘဝယျုံ ဖြစ်ကုန်ရာ၏။
ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာမပြုရသောအပြစ်ကား…ထိုဦးခေါင်း မဆေးကုန်သော သူတို့သည်။ သတ္တ၊ ခုနှစ်ပါး ကုန်သော။ ဒဏ္ဍရောဂါစ။ ဒဏ်၊ အနာတို့သည်၎င်း၊ ဒုက္ခဘာဂါစ၊ ဆင်းရဲခြင်း၏ အဘို့တို့သည်၎င်း၊ သဒါ အခါခပ်သိမ်း၊ ဘဝေယျုံ၊ ဖြစ်ကုန်ရာ၏။
သြင်္ကန်အခါရှောင်ကြဉ်ရန်အမှုများကား နရုဒံမေထုနံသုရာ၊ ဝဓကောဓေနတေလေတာ။ ရုက္ခဆေ ဒါဟ နန္တဿ၊ ကိဏေယျဝိက္ကိဏေယျဝါ။ ဣမာနိဒသကမ္မာနိ၊ သက္ကောပိ ပရိဝဇ္ဇေယျ။ သြင်္ကန်နေ့၌ မတွေ့ဝေးစွာ။ ရှောင်ကုန်ရာ ကား။ မသာနှလုံး ညှိုးချုံး စိုးရိမ်။
မငြိမ်ပူဆွေး။ ငိုကြွေးကုန်ထ။ ကာမ အိမ်ရာ။ မေထုနာက။ ပါဏာသတ်ပုတ်။ သောက်ထုတ် သေရက်။ မျက်ထွက်မာန။ ပဋိဃနှင့်။ ဒေါသမလွတ်။ ဆီပွတ် လိမ်းဆင်။ သစ်ပင်ခုတ်ဖြတ်။ သတ်ခတ် ကုန်ရှောင်။ အရောင်းအဝယ်။ လဲလှယ်ဟူသည်။
ဤဆယ် မည်ကို။ လူ့ပြည်၌တွင်။ လူကို စင်ထား၊ မြင့်မိုရ်ဖျားဝယ်။သိကြားသော်မှ၊ မပြုရရာ။ ရှောင်ကြဉ် ရာဟု။ ကျမ်းလာသောအား။ လင်္ကာကြားသည်။ ဤကား မဟာ သြင်္ကန်အကျ အလိုတည်း။
မဟာသြင်္ကန်အတက်ပိုင်းဆိုင်ရာများ….အင်္ဂါနေ့ဖွား သားသမီးအပေါင်းတို့သည် မတာတက်သော နေ့ အခါသမယ ရတနာ(၃)ပါး၊ ဘိုးဘွား၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ ဝါအားဖြင့် ကြီးမြတ်သူ၊ ညီအစ်ကို၊ အစ်မ၊ မိတ်သင်္ဂဟ အပေါင်းအသင်း တို့အား လှူဘွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်း၊ အာဟာရ ကျွေးမွေး ခြင်း အစရှိသည့် ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ပြီး ဦးချ ကန်တော့ရ၏။
တိထီ(၁၂)လုံး ဘဒြာ အင်္ဂါမြေခံ ဂြဟဇာ အရှေ့ တောင်အရပ်ပွင့်ရာ အရပ်ကို မျက်နှာပြုလျက် ရွှေငွေရတနာများ ဆင်ယင်ပြီး သစ်လွင်သောအဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်၍ သိကြား ဗြဟ္မာ၊ စတုလောကပါလ သာသနာတော်စောင့် သမ္မာဒေဝ နတ်ကောင်း၊ နတ်မြတ်တို့အား၎င်း ပူဇော်ပသပြီး မေတ္တာခံယူ ဆုတောင်းဝတ်ပြုကြကုန်လော။
အတာစားရခြင်း၏အကျိုးကား…. ဤအတာပုည ကုသလကို၊ ပြုကြကုန်သော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည်၊ အတာကမ္မံကရောန္တဿ၊ မဟာဘောဂံ မဟာ သုခံ၊ မဟပ္ဖလံစာတုဒ္ဒိသံ၊ ဝေရီဇေယျံသုမင်္ဂလံ။
ဟု,ပဿေနဒီ ကောသလမင်းကြီးအား မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသည် ကို အကြောင်းပြု၍ ဆိုခဲ့သော ရတနာသုံးပါး စသည်တို့အား လှူဒါန်း ပူဇော် ပသခြင်းသည် အကျိုးကြီးမြတ်လှ၏။ လှူဒါန်း ပူဇော် ပသ ကုန်ရာသည်ဟု ကျမ်းဆရာတို့ ဆိုကြကုန်၏။
ဤနှစ်သည် အတာစက္ကူစာအလိုအရ မာဃနှစ် တည်း၊ နှစ်ကို ဝက်စောင့်၏။ လကို ကျီးစောင့်၏။ ရက်ကို ခွေးစောင့်၏။ မြေကို ဒွန်းစဏ္ဍား စောင့်၏။ ကောင်းကင်ကို ရုတ္တရနတ်စောင့် ၏။ ရေကို ကြွက်စောင့်၏။
မိုဃ်းကို ဝမ်းဘဲစောင့်၏။ တောကို ယစ်စောင့်၏။ လူတို့ အဓိပတိကား- မင်း၊ အခြေ(၄)ခုတို အဓိပတိကား- တောဝက်၊ ငှက်တို့ အဓိပတိကား- စွန်၊ သစ်ပင်တို့ အဓိပတိကား- သင်းကနက်၊ ဝါးတို့ အဓိပတိကား- သိုက်ဝါး၊ မြက်တို့ အဓိပတိကား- မြက်ရဲ၊ နက္ခတ်(၁၃)လုံးငုတ်၏။
(၁၄)လုံး ပေါ်၏။ မြေဩဇာမရှိ။ မိုဃ်းဦး နာအံံ့၊ မိုးလယ် မိုးနှောင်း ကောင်းအံ့။ ရေကြီးအံ့၊ လေနှောင်းအံံ့။ မုန်တိုင်းလေပွေထန်အံ့။ မိုးအကြိမ် (၆၀)ရွာအံ့။ ကောက်ပဲ အသီးအနှံတို့ အဖျင်းမရှိ။ ကျေး၊ တောင်၊တောမကောင်း။
သစ်ပင်ဟူသမျှလည်း မကောင်း။ အမြစ်၊ အဖု၊ အရွက်နာအံ့။ ။အပွင့်၊ အသီးနည်းအံ့။ လူတို့ အနာ အဖျား များကုန်အံ့။ တန်ခူးလဆန်း မိုးသံကြားအံ့။ နယုန်လမှာ ရွာအံ့။ ဝါဆိုလမှာ မိုးမှန်အံ့။ လူတို့ ဝပြောကုန်အံ့။ စစ်မက်မရှိ ပြည်ရှင်မင်း နှလုံးချမ်းသာအံ့။
ထိုနှစ်ဖွားသောသားကား ဥစ္စာ ပရိက္ခရာများအံ့။ ပညာအဆင်အခြင်မရှိ။ လောဘရမ္မက်ကြီးအံ့။ အင်္ဂါလက္ခဏာချို့တဲ့အံ့။ အဆင်းအဝါတံ့အံ့။ အမူအကျင့် ညစ်အံ့။ ချစ်သူခင်သူ နည်းအံ့။ အသက်(၇၀)နေရအံ့။
ယခုနှစ်အတွက် မဟာသြင်္ကန်ကျ အခါလဂ်သည် ကန်ရာသီလဂ် ဖြစ်ပါ သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပညာရေးကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ စာအုပ်၊ စာပေကဏ္ဍကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လာကြမည်။ ထို့အပြင် ဝိဇ္ဇာ၊သိပ္ပံအတတ်ပညာရပ် များ ဦးစားပေး သင်ကြားမှုကို သက်ဆိုင်ရာဋ္ဌာန အသီးသီးမှ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြလတ္တံ့။
မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပညာရေး ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်းသည်လည်း တဟုန်ထိုး တိုးတက်နိုင်သည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများသည်လည်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု ရှိလာနိုင်သည်။ ငွေကြေး ခိုင်မာမှု ရရှိအောင် အဘက်ဘက်မှ ကြိုးစားကြလတ္တံ့။ ငွေကြေး ဖောင်းပွ ခြင်းကို အထူးစီစစ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု ရှိတတ်သည်။
သိပ္ပံနှင့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာရပ်များ အသုံးချမှု ပေါများလာနိုင်သကဲ့သို့ တစ်ဖန် ဝိဇ္ဇာအတတ်ပညာရပ်များကိုလည်း လူအပေါင်းတို့ စိတ်ဝင်စားမှု များလာ အံ့။ အထက်လမ်း၊ အောက်လမ်း မှော်အတတ် အတိုက်ဓာတ် အမျိုးမျိုးကို လည်း စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ကြအံ့။
စီးပွားဥစ္စာ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူ အပေါင်း တို့သည်လည်း လောကီပညာရပ်များကို ငွေကြေးများစွာ အကုန်အကျခံ၍ လိုက်စားကြအံ့။
ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံပညာရှင် အပေါင်းတို့အားတို့၏ ဂုဏ်သတင်း များလည်း ကျော်ကြားမှုရှိတတ်သည်။
ပညာရှိများကို ဖော်ထုတ်ပေးအံ့။ နိုင်ငံတော်အတွက် စည်းကမ်းစနစ် ခိုင်မာသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာကြအံ့။
(၇) ရက် သားသမီးများ ဟောစာတမ်း
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ…တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည် ယခုနှစ်တွင် အရာရာကို ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင်များတွင် ငွေကြေးရင်းနှီးမတည်မှုနှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု တို့ကို စွန့်စွန့်စားစားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လာဘ်လာဘ ပေါများ လာတတ်ပါသည်။
သို့သော် ရံဖန်ရံခါ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါသော်လည်း တုန်လှုပ်မှု မရှိစေဘဲ ရဲဝံ့ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားရန် လိုအပ်ပါမည်။
ဤနှစ်ထဲတွင် အပျို၊ လူပျို အပေါင်းတို့ အချစ်ရေး ကိစ္စရပ်များ ကို ဦးစားမပေးသင့်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်များအဖို့ အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးပါ။
ပညာရေးလောကတွင် အထူးကံကောင်းသောနှစ်ဖြစ်ပါ၍ လူငယ်၊ လူကြီး မရွေး ကြိုးစားအားထုတ်ပါ။ မိမိလိုက်စား သင်ကြားနေသော ပညာရပ်သည် မိမိဘဝကို မြှင့်တင်ပေးပါလိမ့် မည်။
ကျန်မာရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ မမျော်လင့်ဘဲ ရောဂါဝေဒနာ များ ဝင်ရောက်လာတတ်သည်။ထို့အပြင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် မမျော်လင့်သော ယာဉ်အတိုက်အခိုက် ဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြင့်လည်း ကြုံတတ်သည်။ မိမိအသက်အန္တရာယ်ကို ထိပါးလာတတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲသတိထားပါ။
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကံကောင်းရန် မြောက်ဘက်အရပ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနေရာ၌ သဲပုံ စေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း၊ ပုန်းညက်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အနောက်မြောက်အရပ် လမ်းဘေးဝဲ/ယာတွင် ဇောင်းယားပင် စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါ။
နီရွှေရောင်၊ ပတ္တမြား အဆင်း ရှိသော ကျောက်မျက်ရတနာကို ဝတ်ဆင်ပါ။ တနင်္ဂနွေသားသမီး များ ၁နှစ်ပါတ်လုံး အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၅-၉-ဝ။
တနင်္လာနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည် ယခုနှစ်တွင် မိမိ အလိုဆန္ဒများ မပြည့်ဝတတ်ပေ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် စဉ်းစားဆင်ခြင် သတိချပ်၍ လုပ်ကိုင်သင့်သည်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် ရင်းနှီးမတည်ရသော လုပ်ငန်းများကို လွန်ကဲစွာ မပြုလုပ်သင့်ပေ။
ရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးစတော့ ဈေးကွက်များ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ထီသော်လည်း ပေါက်နိုင်သည်။ သို့သော် မိမိသဘောထားဖြင့် မိမိထင်ရာကို တစွတ်ထိုးမပြုလုပ်ပဲ အမြဲတစေ နှီးနှော တိုင်ပင်လုပ်ကိုင်ပါ။ ေ
ငွကြေးပြတ်လတ် ငွေ အခက်အခဲ ဖြစ်တတ်သည်။ မိသားစုနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေနွေးသင့်ပါ သည်။မိတ်အဆွေအပေါင်းအသင်းများ သတိထားပါ။ အချစ်ရေး လောကအတွက် မိမိအသုံးချခံရတတ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရှင် များသည်လည်း သားသမီး အပူသောက မိဘ၊ညီအစ်ကို မောင်နှမ အပူသောက ပေါများတတ်ပြီး အိမ်တွင်ရေး ပဋိပက္ခများတတ် သည်။ ပညာရှာဖွေနေသူများသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်ကို ဦးစားပေး သင်ကြားပါ။ မိဘအုပ်ထိန်း သူများသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေး တန်ဖိုးမြှင့်တက်လာမှုကြောင့် အကြပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သွေးတိုး၊ သွေးကျ၊ နှလုံးနှင့် ဦးနှောက် အာရုံကြောရောဂါများ ဝင်လာတတ်သည်။ ကြိုတင်၍ ကျန်းမာရေး လိုက်စားပါ။ အထူးသဖြင့် ယောဂကျင့်စဉ်များ ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။
တနင်္လာသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်…အရှေ့မြောက် ဘက် အရပ်မှာ ဘုရားဆင်းတုတော် တည်ထားကိုးကွယ်ပါ။ ဘုရားစေတီဟောင်းများ ပြုပြင်ခြင်း၊ဆေးသုတ်ခြင်း၊ရောင်တော် ဖွင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
ချယားပင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အရှေ့အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာ၌ လက်ပံပင်စိုက်ပါ။ အဖြူရောင်ရှိ ပုလဲရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။ တနင်္လာသားသမီးများ ထီထိုးရန် (၄)ဂဏန်းအစ (၄)ဂဏန်း အဆုံးဖြစ်သည်။
အင်္ဂါနေ့ဖွားအပေါင်းတို့သည် ယခုနှစ်တွင် စိတ်အလိုမကျမှုများ မကြာခဏ တွေ့ရမည်။ ထို့အပြင် မိမိဒေါသကြောင့် မိမိဘဝ ထိခိုက်နစ်နာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုလည်း ဖြစ်တတ်သည်။
စီးပွားရေး လောကတွင် မိမိကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် နှောင့်ယှက်ဖျက်စီး ခြင်း အမျိုးမျိုးဝင်လာတတ်သည်။ လူပယောဂအရသော်၎င်း၊ ဆေးဝါး ပယောဂအတိုက်ဓာတ်၊ အောက်လမ်း၊အထက်လမ်း အစရှိသည့် နည်းမျိုးစုံ ဖြင့် မွေနှောက်တတ်သည်။
ကာယအလုပ်ဖြင့် စီးပွားရှာဖွေနေသူများ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းဝေးရေးကို သတိပြု ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။ ငွေကြေး ချေးငှား ကြွေးမြီတင် မနိုင်မနင်းဖြစ်တတ်သည်။
အချစ်ရေးကိစ္စ ရပ်အတွက် မည်သူကိုမျှ ယုံကြည်၍မရပါ။ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် အပြောင်း အလဲရှိတတ်သည်။ အပျို၊ လူပျိုများ မကြာခဏ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် လူမှုရေးပြဿနာများ တက်လာနိုင်ပါ၍ ယခုနှစ်တွင် အိမ်ထောင်မပြု သင့် ပေ။
နှစ်ကိုယ် သဘောတူလက်တွဲခြင်း၊ အခွင့်အရေးယူခြင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာတွေ့ဆုံခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် မကြာခဏ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ဖိစီးခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။အထူးသဖြင့် ကူးစက်တတ်သော ကာလာပေါ် အနာရောဂါများ သွေးနှင့်သက်ဆိုင်ရာပိုးမွှား ရောဂါများ၊ ခုခံအားကျဆင်းရောဂါများ၊ အတိုက်အခိုက် ထိခိုက် အနာတရ ကျိုးပဲ့တတ်သည်။
လူစည်ကားရာနေရာများ အသွားအလာ ရှောင်ပါ။ ယာဉ်ပစ္စည်း၊ လက်နက်ပစ္စည်း၊ မီးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ သံထည်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရာ သတိပြုပါ။ အင်္ဂါသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်… အရှေ့အရပ် သင့်တင့် လျောက်ပတ်သော နေရာ၌ တံခွန်စိုက်ပါ။
သရဖီပင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အနောက်တောင်အရပ်၌ လမ်းဘေး ဝဲယာတွင် ပေါက်ပန်းဖြူစိုက်ပါ။ နီရဲသော သန္တာကျောက်မျက်ရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။ အင်္ဂါသားသမီးများ ထီထိုးရန် (၆)ဂဏန်းအစ (၄)ဂဏန်းအဆုံး ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွား အပေါင်းတို့သည် မိမိ၏ ကံနှင့်ဉာဏ်ကို အားကိုးပြီး မလျှော့သော ဇွဲ၊လုံ့လ၊ဝိရိယဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါ။ ယခုနှစ်တွင် အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံလေ ဘဝအတွက် အောင်မြင်မှု မကြာခင် ရရှိတော့မည်ဟု ယုံကြည်ပါ။
အရာရာကို အလေးအနက်ထားပြီး ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ပါ။ငွေရှင် ကြေးရှင်၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ဥစ္စာရှင်များ မိမိအား ကူညီရန် စောင့်ကြည့်နေသည်။ ထို့အပြင် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများ၊ အပြစ်မကင်းသော စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများလည်း မိမိထံရောက်ရှိ လာတတ်သည်။
ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံ အတတ်ပညာရပ်များကို မိမိဝါသနာအား အရင်းခံ၍ ထွန်းပေါက် အောင် သင်ကြားပါ။ ဘဝအတွက် တိုးတက်ချမ်းသာမည့် စီးပွားရေး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါမည်။ ပညာရပ်ကို အခြေခံပြီး ရှာဖွေသော စီးပွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ အထွဋ်အထိပ်ရောက်ရှိမည်။
အချစ်ရေး ကိစ္စရပ်အတွက် အပျို၊ လူပျိုများ မလျှော့သောဇွဲဖြင့် ချဉ်းကပ်ပေးပါ။ လိုချင်တောင့်တအပ်သော အရာမှန်သမျှ ရရှိနိုင်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အတွက် သားသမီး၊တပည့်များ တိုးပွားလာမည်။
မိမိတို့၏ ရှေ့ရေး ဘဝ တိုးတက် ခိုင်မြဲနိုင်ရန် အထောက်အကူရရှိရန် စိတ်ရှည်သီးခံပြီး တပည့် မွေးမြူရန် သင့်တော်ပေသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောဂါများ သတိပြုပါ။
မကြာခဏ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါများ ၊ အဆစ်များကိုက်ခဲခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောနှင့် သက်ဆိုင်ရာ များ သတိပြုပါ။မမျော်လင့်သော ဘဝအပြောင်းအလွဲများ ဖြစ်တတ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်… အရှေ့တောင်အရပ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနေရာ၌ လမ်းခင်းပါ။ တံတားဆောက်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
ကွမ်းသီးပင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ တောင်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် သခွပ်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါ။
အစိမ်းရောင်ရှိသော ကျောက်စိမ်း ရတနာကို ဝတ်ဆင်ပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ သားသမီးများ ထီထိုးရန် အကျိုးပေး ဂဏန်းများမှာ ၅-၉-ဝဖြစ်သည်။
ကြာသပတေးနေ့ဖွား အပေါင်းတို့သည် ယခုနှစ်တွင် စွန့်စားလုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းများကို မကြာခဏ လုပ်ကိုင်ရတတ်ပေသည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆို သစ္စာဆို တိုင်တည်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာ လုပ်ကိုင်ပါ။ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင် သည် မိမိလက်တကမ်းသို့ ရောက်ရှိနေပါမည်။
လူချစ်လူခင်ပေါများမည်။ အထက်တန်း ပုဂ္ဂိုလ်များက မိမိအား အလေးထား ချီးမြှင့် မ,ဆခြင်းကို ခံရ တတ်သည်။ စည်းကမ်းစနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ရမည်။ ကာယလုပ်သားများ ဖြစ်ပါက မိမိလုပ်အားခ အပြည့်အဝ ရရှိမည်။ အခွင့်ထူးများ ရရှိနိုင်သည်။
သို့သော် မိမိ၏ဘဝနစ်မွန်း ခံရတတ်သည်။ ပညာရှိ၊ သူတော်ကောင်း ပုဂ္ဂိုလ် များကို အမြဲစည်းကပ်ပါ။ အကြံဉာဏ်များ ရယူပါ။ အပျို၊ လူပျိုများ ဖြစ်ပါက မိမိ အားကိုးအားထားပြုရသော ဖူးစာရှင်ကို တွေ့ရတတ်ပြီး ဘဝ တိုးတက်မှု ရှိနိုင်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များအနေဖြင့် မိမိ မိသားစုအပေါ် သစ္စာစောင့်ထိန်းသင့်ပါသည်။ အပူကပ်လာသူများကြောင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ပူလောင်ရတတ်၏။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ယခုနှစ်အတွက် စိတ်နှစ်ခွ ဖြစ်တတ်သည်။
ပညာဆည်းပူနေသူများလည်း ရှေ့မတိုး နောင်မဆုတ်သာ ဖြစ်တတ်သည်။ သို့သော် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ဘဝရပ်တည် ရေးအတွက် ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။
အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး ကို သတိပြုပါ။ သောကမီးများ ဝန်းရံလာတတ်သဖြင့် အမှားမှားအယွင်း ယွင်းဖြစ်တတ်သည်။ ဆေးစားမှားခြင်း၊ ဆေးကုသရာတွင် အနာတခြား ဆေးတခြား ဖြစ်တတ်သည်။
ကြာသပတေး သားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်… အနောက်တောင် အရပ်မှာ ဇရပ်ဆောက်လှူခြင်း၊အမိုးအကာပြုပြင်ခြင်း၊ဘုရားစေတီဟောင်း ပြုပြင် ဆေးသုတ်ခြင်းများ ပြူလုပ်ပါ။ ဒါန်းပင် စိုက်ပျိုးပါ။
အရှေ့မြောက် အရပ် လမ်းဘေး ဝဲယာတွင် ထနောင်းပင် စိုက်ပျိုးပါ။ အဝါရောင်အဆင်း ရှိသော ဥဿဖရား ရတနာကိုဝတ်ဆင်ပါ။ ကြာသပတေး သားသမီးများ ထီထိုးရန် အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ (၅)ဖြစ်သည် စပ်တူထီထိုးပါ။
သောကြာနေ့ဖွား အပေါင်းတို့သည် ယခုနှစ်တွင် မမျော်လင့်သော စည်းစိမ် ဥစ္စာများ ရရှိခံစားရတတ်သည်။ မိမိတို့၏ ဂုဏ်သတင်းများလည်း ကျော်ဇောတတ်သည်။ မိမိအလိုရှိရာကို ဖန်တီးရယူနိုင်သည်ဖြစ်ပါ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရင်းနှီးမတည်မှုပြုလုပ်ပါ။
သို့သော် ခိုင်မာတိကျသောလုပ်ငန်းများ၊ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်စွာ လုပ်ကိုင်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းထက် မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ပို၍ ကောင်းသည်။
ဝန်ထမ်းလောက လုပ်ကိုင်နေပါက မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်ရန် အကြံပြုပါသည်။ မိမိအကျိုး သူတစ်ပါးအကျိုး လည်းဖြစ်ထွန်းပါမည်။အချစ်ရေးလောကတွင် အထူးမျက်နှာပွင့်လန်းသော နှစ်ဖြစ်သည်။
အများအကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းများတွင် မိမိဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားမှု ရှိမည်။ ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးများလည်း ရရှိတတ်သည်။ အပျို၊ လူပျိုများ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် စဉ်းစားရမည်။ အိမ်ထောင်ပြုရန် သင့်တော်သောနှစ်လည်းဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် ခင်မင် ရင်းနှီးမှုကို အကြောင်းပြ ပြောဆို၍ ပေးအပ်လာသော အပိုလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ လက်မခံသင့်ပေ။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မပေးသင့်ပါ။ ပုံမှန် အားကစား တခုခုကို အမြဲလုပ်ပါ။
လူအများဖြင့် ပြုလုပ်ရသောအားကစား တမျိုးကို လိုက်စားပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်း စိတ်ရွှင်လန်းပါမည်။ သောကြာသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်…. အနောက်မြောက် အရပ်မှာ တန်ဆောင်းပြုလုပ် လှူဒါန်းခြင်း၊ လှေကားပြုပြင် လှူဒါန်းခြင်း ပြုလုပ်ပါ။ မြောက်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် အုန်းပင်စိုက်ပျိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
စိန်ရတနာကို ဝတ်ဆင်ပါ။ သောကြာနေ့ဖွား သားသမီးများ ထီထိုးရန် စပ်တူရှယ်ယာ (သို့မဟုတ်) သူတပါးအား ထီထိုးခိုင်းပြီး ထီလက်မှတ် သိမ်းဆည်းပါ။ ထီပေါက်နိုင်ပါသည်။
စနေနေ့ဖွား အပေါင်းတို့သည် ယခုနှစ်တွင် မိမိလက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်အကိုင်မှ အကျိုးအမြတ် ထူးထူးခြားခြား ရရှိပါလိမ့်မည်။ သို့သော် မိမိအလိုဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ရန် မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ စီမံခန့်ခွဲပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရမည်။
မည်သူကိုမျှ ယုံကြည်၍မရပါ။ ငွေကြေးအရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်ပါ။ မနိုင်ဝန်ကို မထမ်းပါနှင့်။ မိတ်သင်္ဂဟအခြွေအရံများ ပေါများ လာအောင် လူမှုရေးကိစ္စများလုပ်ပါ။အများလေးစားကြည်ညိုခံရတတ်ပြီး ဘဝအထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိပါမည်။ တရားသောနည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေး များစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းလောကတွင် လုပ်ကိုင်နေပါက အမှောင်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေး ရှာဖွေခြင်းကို လုံးဝစွန့်လွတ်ပါ ဒုက္ခရောက်တတ်သည်။ အချစ်ရေးသမားများအတွက် မိမိအား ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအချို့ ချဉ်းကပ် လာတတ်သည်။
အပျို၊ လူပျိုများ မိမိ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရန်အတွက် အခွင့်အလန်းများရှိသည်။ သို့သော် အမုန်းပွားစေတတ်သော အပြစ်မကင်း သော အမှုကိစ္စများ မကြူးလွန်ရန် သတိပြုပါ။ ပညာရေးအတွက် ဤနှစ်သည် စနေသားသမီးများ ဂုဏ်ထူး၊ ဘွဲ့ထူးခံရမည့် မင်္ဂလာရှိသောနှစ် ဖြစ်သည်။
ပညာရေးကဏ္ဍ အသီးသီးရှိ လူကြီး၊ လူငယ် လူတန်းစားမရွေး ဆက်လက် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြရန် အကြံပြုပါသည်။ကျန်းမာရေးအတွက် စည်းကမ်းစနစ်တကျ စားသောက်ခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ အပန်းဖြေ ခရီးသွား လာခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စင်တာများတွင် စစ်ဆေးခံယူခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
မထင်မှတ်သော လောကဓံတရားများ ရိုက်ခတ်လာနိုင်သည်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူ့ပယောဂအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိပိုင်ဆိုင် ထားရှိသမျှ အားလုံး တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ပျက်စီးရတတ်သည်။
ရန်သူအပေါင်း စုပေါင်း လုပ်ကြံလာတတ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားအတိုင်း အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ ဒါနကုသိုလ် သီလကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါ။
စနေသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်…. တောင်အရပ်မှာ တံခွန် စိုက်ပါ။
ကံ့ကော်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အနောက်တောင်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် ကြက်ဆူပင်စိုက်ပျိုးပါ။
နက်ပြာရောင်ရှိသော နီလာရတနာကို ဝတ်ဆင် ပါ။ စနေသားသမီးများ ထီထိုးရန် သူတပါးအတွက် ရည်စူး၍ ကြုံရာ ထီဂဏန်းကို ထိုးပါ။